- केदार न्यौपाने आफ्नो चिज नराम्रो देख्ने कसैको आँखा हुँदैन । आफ्नो चिजको कमजोरी लुकाउँदै सवल पक्षको मात्र वकालत गर्ने मानविय प्रवृति नै हो । तथापी मेरो मनमा जे गुञ्जियो मेरो आँखाले जे देख्यो त्यो शब्द भित्रमा उतार्नु मैले आफ्नो कर्तव्य सम्झिए। अत्याधिक संभावना हुँदा हुँदै सिन्धुपाल्चोक विकाशीय दृष्टिले पछाडि परेको छ। यहि भुमिको प्रयोग गर्दै हजारौँ मान्छेले करोडौँ लाखौँ रकम कुम्ल्याएका छन्। तर यहाँका वासिन्दा हेरेका हेर्यै छन् । उनिहरुको दुख दर्द जहाँको त्यँही छ । अनेकौँ विविधताले बनेको सिन्धुपाल्चोकको छुट्टै विगत छ, बेग्लै इतिहास छ र हामी सबैले देखेको भोगेको कटु यथार्थ र तितो वर्तमान पनि छ ।
जेल चलाऊ पत्रकारलाई
टीका सुवेदी सिन्धुपत्रकारिताको कालखण्डमा अनेकौं कालरात्री पार गर् यो । बरु आपुनो बलिदान स्वीकार गरे तर आत्मसमर्पणको हात उचालेनन् काचन र ज्ञानेन्द्रले । घाँटी रेट्न दिए छातीमा गोली थापे तर कदाचित झुकेनन् पि्रय पत्रकार मित्रहरु । तिनै पत्रकारको रगतमा हुर्किरहेको सिन्धुपत्रकारिता गौरवपूर्ण इतिहास अगाडि बढाउने सिलसिला चलेकै छ । फैलिँदो छ पत्रकार योद्धाहरुको उत्साह र थपिँदैछ पेशाकर्मीहरुको संख्या ।
तीज भो ! नआइज रुवाउन
अमित घिमिरे हाम्रो मान्यतामा परापूर्वदेखि नारीहरुको समपर्णले संसारलाई मात्र नभइ स्वयम् विधता समेतलाई चकित तुल्याएको तथा जितेको समेत शास्त्रको प्रमाण छ । दन्दनी दन्किरहेको आगाको लप्कामा भित्रेर पनि दग्ध नभएकी-सतीत्व पेश गर्न सकेकी सीता मृत्यु भइसकेको पतिलाई पुनजीवित गराउन सफल सावित्री जङ्गलको दहशतमा फैलेको भयानक आगोको डढेलोलाई सत्यको शक्तिले मत्थर गराउँन सफल चन्द्रमती दुष्ट व्याधालाई खरानी तुल्याइदिने दमयन्ती जस्ता थुप्रै नारी त्याग समर्पण र महानताका गाथा छन् । र धेरै पर्वहरु चाडहरुमा नारी समपर्णका किस्साहरुलाई यो शताब्दीमा समेत निरन्तरता कायम राखेको व्यवहारीक यथार्त छ ।
राजन न्यौपाने दिवाक पाख्रिन नाम बताउने त्यस ब्यक्तिले नारायणगढबाट घर फर्कको र भैरबकुण्ड पनि पुग्ने र त्यतैबाट घरजाने कुरा गरको थियो। जलबिरेको मोटरबाटो पहिरोले अबरुद्ध हुँदा लार्सा दुगनागढी बगाम हुँदै घर जान सकिने कुरा पनि बताएकोले त्यसको घर लिस्तीको गुम्बा नभई गुम्बा गाविस हुनसक्ने बुझिन्छ। उसले आफ्नो घर चनौटेबाट २ घण्टा जतिमा पुग्ने पनि बताएको थियो। करिब २ घण्टा हिडेपछि हामी दुगुना गाँउ पुग्यो। दुगुना सुन्दर शेर्पा बस्ती हो। हामी पदयात्राका क्रममा पेइङ गेस्टका रुपमा बस्न मिल्ने माया शेर्पाको घरमा त्यसै केटाको सल्लाहले बास बस्यौ। बेलुकाको खाना खाएर हामी थाकेकोले सुत्यौ पनि। दुर्भाग्य हाम्रो यात्रामा सहभागी बनेको त्यो केटा हाम्रो झोला, क्यामेरा,खानेकुरा, कपडा तथा लगाएको जुत्तासमेत सबै चोरेर राती नै भागेछ।
- राजन न्यौपाने श्रावण शुक्ल पुर्णिमाका दिनमा मनाईने जनैपूर्णिमाका अवसरमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको पाँचपोखरी र भैरवकुण्डमा ठुलो मेला लाग्ने गर्दछ। हिन्दु तथा बौद्ध धर्माबलम्बीहरुको आस्थाको केन्द्र यी दुई धार्मिक स्थहरुको मानव विकासक्रममा महत्वपूर्ण स्थान रहेको विश्वास गरिन्छ। पर्याप्त महत्व नदिनाले यस क्षेत्रको प्राकृतिक तथा धार्मिक महत्व ओझेलमा परेको छ। राजधानी नजिकैको यी दुई पर्यटकिय तथा धार्मिक महत्वका ठाँउहरुका बारेमा ब्यापक प्रसार प्रसार गर्न सके यहाँ भ्रमण गर्ने पर्यटकहरुको संख्यामा विकास हुनगई स्थानीय जनताको आर्थिक अवस्था धेरै माथि उठ्ने सम्भावना छ।
+२ को भर्ना अभियानभित्रका अपराध
अमित घिमिरे यति नै बेलाको अनेकन चटाराहरु मध्ये २ को भर्ना अभियान पनि एक हो । त्यसो त राष्ट्रिय राजनीतिको छायाँले धेरै कुरालाई ओझेलमा पारेको छ । र यस्ता छायाँहरु कतिपय अर्थमा मौकाको ताक हेर्नेलाई चौका दाउ पल्टने समय पनि हो । चतुर स्यालले ुलौ ऊ हेर आकाशमा चील आयो बाज आयो चल्ला चिचिला बोक्योु भनेर ककंलशवत गर्ने र ध्यान आकाशतिर लगाइदिने अनि आँगनबाट आफै चल्ला चिचिलाका माउ नै बोकेर हिँड्नेहरुको समय हो यो ।
नत्र बामपन्थीहरुको तुप्क्याँनमा क्षय हुने छ काँग्रेस
अमित घिमिरे सुविधाभोगी भएर राजधानीमुखी भएर युवा र विद्यार्थी अनि अग्रजहरुलाई संवोधन गर्न नसकेर काँग्रेस सिन्धुमा मात्र नभै सिगों देशमा अलप प्रायः भैरहेका छन् । राजसी जीवन भोग सत्ता लालसाको लालचले र सधै एकै व्यक्तिको एकाधीकारका कारण नेपाली काँग्रेसलाई जनता कार्यकर्ताबाट पर-पर लगेको निश्चय हो । नीतिगत मामलामा बाघ वुढो भई राख्ने अनि व्यवाहारगत रुपमा जहिले पनि स्याल तन्नेरी बन्ने महारोगले घर गरेको छ-काँग्रेस भित्र ।
गजलको लहरमा पौडन्छ्यौ त साँईली
-कला अनुरागी kalaanuragi@artlover.com प्यारी बहिनी साइली मायाको असीम लहरले छोपेको सम्झना । तिम्रो पत्रले मेरो मन खुशीको सगरमाथामा चढेर िसंगै संसारलाई उज्यालो देख्छु भनिरहेछ । साँच्चै तिम्रा पत्रहरुमा के जादू हुन्छ हौ त्यस्तो । अर्को पत्रमा सुटुक्क लेखेर पठाउ न है । अँ ! तिमीले मलाई पनि गजल लेख्न सिकाईदिनु न है भनेर लेखेकी रहेछौ । आज म पत्रमा तिमीसँग त्यसैको बारेमा कुरा गर्छु नि है । खुशी हुन्छ्यौ नि है !
जिल्लाको पत्रकारिताबारे केही कुरा
तुलनात्मक हिसाबले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको पत्रकारिताको इतिहास धेरै पुरानो होइन तथापि यसले झण्डै शताब्दी समय गुजरिसकेको छ । यो अवधिमा यसले थुप्रै पत्रकारहरु जन्माएको छ हुर्काएको छ र राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर् याएको छ । इश्वरीमान श्रेष्ठदेखि अहिलेको नयाँ पुस्तासम्म आइपुग्दा दर्जनौं पत्रकारहरुको सूची यो जिल्लासँग छ । यो खुशीको कुरा हो ।
युवालाई औजार र गुण्डा बनाइरहेको छ राज्य सत्ता
अमित घिमिरे चौतारा-८ सिन्धुपाल्चोक लोकतन्त्र र गणतन्त्रको अभ्यूदय पछि राज्य थप िहंस्रक र बगडे बनेको छ । मानिसको मासु खाने सर्वहाराहरुको खुन प्यूँने र पसिनाको अवमूल्यन गर्दै वधशालाको नियतिमा मुलुकलाई लैजाने होडबाजी छ । खास गरी न्युन वर्गिय नागरिकहरु मारमा परेका छन् । अराजक मुलुकमा गुण्डाराज चलाईएको छ । त्यस्का थुप्रै दलिल र नजिरहरु हामी माझ छ ।